China Ụlọ Elu Ìhè Igwe Ndị na-anya ụgbọ ala, Ndị na-akwọ ụgbọ ọkụ ọkụ, Ndị na-ebupụ onye na-akwọ ụgbọ ala
Nkọwa:Ndị na-akwọ ụgbọ ala dị na ụlọ,Ejiri Ido Uhie,Ebube na-echekwa ihu igwe,,,
Home > Ngwaahịa > Ebube Ndị Na-ahụ Maka Ụlọ Ahịa > Onye na-enwu ọkụ ọkụ n&#39;ụlọ
Ngwaahịa nke Onye na-enwu ọkụ ọkụ n'ụlọ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ndị na-akwọ ụgbọ ala dị na ụlọ , Ejiri Ido Uhie suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ebube na-echekwa ihu igwe R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Eji Ike Ike 30W Onye Nduzi Uzo Ntanya  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkụ ọkụ ọkụ maka ọkụ ọkụ ọkụ ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
60W Ọkwọ ụgbọala di elu nke ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
Triac nke na-egbukepụ ebe a na-ekpuchi ya  Kpọtụrụ ugbu a
Ufọk ụgbọala na-akwọ ọkụ ọkụ nke Ụlọọrụ  Kpọtụrụ ugbu a
Ebe obibi Hosehold Ike Supply Supply Dimmable  Kpọtụrụ ugbu a
Ike Ụlọ Ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
Dimming Light Home Led High Efficiency Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkụ na-enwu ọkụ na-aga n'ihu n'ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
Eji Ike Ike 30W Onye Nduzi Uzo Ntanya
Nkwakọ ngwaahịa: 100PCS / CARTON
Onye na-akwọ ụgbọala ọkụ ụlọ ọkụ ọkụ Ọkụ eletriki Lightlight, Ebube bụ ụlọ ọrụ Eletrọniki nke na-enye ngwọta ọkụ ọkụ (Dimming Light Led) na ndị ahịa, na-enyere ha aka belata ọnụahịa, ike ike na mmetụta gburugburu ebe obibi. A nabatara aka maka ndụ...
Ọkụ ọkụ ọkụ maka ọkụ ọkụ ọkụ ụlọ
Ufọk ụgbọala na-akwọ ọkụ ọkụ nke Ụlọọrụ Ọkụ eletriki na-ekpuchi eletrik, Ụlọ ọrụ na-enye ihe ntanetị ọkụ ọkụ (Dimming Light Led) na ndị ahịa, na-enyere ha aka belata ọnụahịa, ike ike na mmetụta gburugburu ebe obibi. A nabatara aka maka ndụ ogologo...
60W Ọkwọ ụgbọala di elu nke ụlọ
Triac nke na-egbukepụ ebe a na-ekpuchi ya
Ufọk ụgbọala na-akwọ ọkụ ọkụ nke Ụlọọrụ
Ebe obibi Hosehold Ike Supply Supply Dimmable
Ebe obibi Hosehold Ike Supply Supply Dimmable Ọkụ eletriki na-ekpuchi eletrik, Ụlọ ọrụ na-enye ihe ntanetị ọkụ ọkụ (Dimming Light Led) na ndị ahịa, na-enyere ha aka belata ọnụahịa, ike ike na mmetụta gburugburu ebe obibi. A nabatara njide maka ndụ...
Ike Ụlọ Ọkụ ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 4.5 / Piece/Pieces
Dimming Light Home Led High Efficiency Driver Faịlụ bụ ụlọ ọrụ Electronics nke na-enye ngwọta ọkụ ọkụ (Dimming Light Home Led) na ndị ahịa, na-enyere ha aka belata ọnụahịa, ike ike na mmetụta gburugburu ebe obibi. A nabatara njide maka ndụ ogologo...
Ọnụahịa otu: USD 2.5 / Piece/Pieces
Ọkụ na-enwu ọkụ na-aga n'ihu n'ụlọ
Gbaa mbọ Ndị ọkwọ ụgbọala na-ahụ maka ime ụlọ dị iche iche maka iji ọkụ ọkụ ụlọ, iji rụọ ọrụ ọkụ ọkụ. Ogologo ihe dị 12W ruo 20W, UL, FCC, CB, CE na-erube isi, mmepụta voltage dum nke na-enweghị mmepụta mmiri. Nkeji ahụ kwesịrị ekwesị maka Ụlọ ọkụ...
China Onye na-enwu ọkụ ọkụ n'ụlọ Ngwa
Usoro nlekọta nke ndị ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ, dị mma maka ojiji dị iche iche nke ụlọ ndị ọkụ ọkụ, gụnyere ebe obibi ndị ọkụ ọkụ ọkụ, Kitchen Lighting, ime ụlọ ọkụ Lighting, Entertainment Lighting, wdg. Anyị nwere ndị ọrụ nkà na ụzụ iji zaa ajụjụ gị nile na ajụjụ gị ma nye gị ihe niile- ihe ngwọta na-adabere na oru (s) gị ma nye nkwado nkwado.
Kpọtụrụ maka ọkụ ọkụ ụlọ, Ọ bụrụhaala na ụlọ maka ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, oriọna na ihe ndị dị otú ahụ, ọkwọ ụgbọala ndị na-adịghị mmiri n'ime mmiri .Europe na United States na mbụ, ịmepụta nchekwa gburugburu ebe nchekwa na mbụ, ọtụtụ ewu ewu. ihe ndị dị mkpa bụ nchedo nlekọta mkpirikpi dị elu, nke dị elu.
Ezi àgwà nke onye ọkwọ ụgbọala na-eduzi ya na arụmọrụ dị elu iji mezuo ihe dị iche iche achọrọ
Ndị na-akwọ ụgbọ ala dị na ụlọ Ejiri Ido Uhie Ebube na-echekwa ihu igwe